Ukuxhumana nokubonakala | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 22, 2012 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Sisebenzisa i-GotoMeeting cishe njalo ngosuku olulodwa emsebenzini ukukhuluma namakhasimende ethu. Kuhle impela ukubona elinye lamakhasimende ethu nabaxhasi bethu, iMindjet, enenkanyezi kuvidiyo yeGotoMeeting! Ividiyo ikhuluma ngokuqondanisa. Ukuthi udizayinela i- ibalazwe lomqondo noma ukubuyekeza uhlelo lwephrojekthi… ukubonakala kuyisihluthulelo. Amamephu engqondo abona ngeso lengqondo imibono, izinqubo nokuxhuma ukwenza kube lula ukuyiqonda.
I-Gotomeeting, kunjalo, yenza okufanayo ngekhono manje lokuxhumana ngokuzwakalayo, ngokubonakalayo (kufaka phakathi ividiyo yangempela ye-webcam), nangokufaka isicelo ukuletha abantu abavela kuyo yonke iplanethi noma kuyo yonke inkampani egumbini elilodwa. Ngenkathi kungumkhangiso wentengiso, umyalezo wokuthi umngani wami omuhle nozakwethu UJascha Kaykas-Wolff brings, kubalulekile.
Uma ungathanda ukuzwa okuningi kusuka kuJascha - qiniseka ukulalela ingxoxo yethu:
Lalela Ingxoxo yethu noJascha!
Tags: ukujabhaUJascha Kaykas-WolffI-Mindjetibalazwe engqondweni
Ibhokisi Lamathuluzi Lokujikelezisa Amabhizinisi Amancane
Aug 27, 2012 ngo-12: 28 PM
Ngiyabonga kakhulu, Doug, ngokwabelana ngevidiyo yethu ye- # MeetingIsBelieving noJascha! Kuningi okuzayo okuzoba noJascha noMindJet 🙂 Ngiyethemba wenza kahle!
Aug 27, 2012 ngo-3: 58 PM
Uyabheja, @justinlevy: disqus! Umkhiqizo omuhle nevidiyo yenziwe kahle kakhulu. Futhi kwangikhumbuza ukuthi ngidinga ukungcolisa nge-GotoMeeting ku-iPad yami!